Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay Waxgaradka gobolada Sanaag iyo Hayland[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay Waxgaradka gobolada Sanaag iyo Hayland[Sawirro]
BOOSAASO – Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo arbaco ah magaalada Boosaaso kulan kula yeeshay qaar kamid ah nabadoonada iyo Waxgaradka beesha Warsangeli.
Kulanka ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Mudane Axmed Cali Xaashi, Wasiirka Amniga Axmed Cabdullaahi Yusuf (Dowlad) iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, taliya ciidamada daraawiishta Gen. Saciid Maxamed Xirsi, saraakiisha ciidamada gobolada Sanaag iyo Hayland.
Kulankan ayaa looga hadley xaaladda amni ee gobolada Sanaag iyo Haylaan iyo weliba gobolka Bari oo ay ku sugan yihiin kooxo ka tirsan ururka al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada beeshu ay degto.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ugu horayn kulanka furay ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay in meel looga soo wada jeesto hadaf midaysana laga yeesho Al-shabaab, kuwaas oo ku dhuumaalaysta buuralayda Calmadaw, islamar ahaantaana sheegay in dawladdu diyaar u tahay qorshe kasta oo lagaga gungaadhayo soo afjaridda kooxaha Al-shabaab ee lidka ku ah jiritaanka, horumarka, iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Waxgaradka Sanaag & Haylaan ayaa si weyn uga cabanaya istraatiijiyad xumada Dowladda ee ku aadan al-Shabaabka ku sugan Buuraha Calmadow, sida wakhtigu u dheeraadey iyo in aanu muuqan qorshe lagu soo afjarayo. Malayshiyaad ka tirsan al-Shabaab ayaa laba jeer weerar ka geystey tuulada Af urur oo ay ku dileen ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Puntland, iyo weliba dad shacab ah oo kamid ahaa dadka deggan Af urur.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo magaalada Bosaso ay ka taagan tahay muran u dhexeeya qaar kamid ah waxgaradka gobolka Bari iyo Madaxweynaha Puntland taas oo salka ku haysa heshiiska shirkadda DP World ay kula wareegeyso dekadda Bosaso.
Waxgaradka Sanaag iyo Haylaan oo kamid ah dadka wax ka deggan gobolka Bari ayaa si weyn u saluugsan qodobo kamid ah heshiiska DP World ay kula wareegeyso dekadda Bosaso kaas oo dhigaya in aan wax dekado ah laga sameyn karin dhul ku dhaw 200km oo dhan kasta ah, Waxaa jirey mashruuc muddo socdey oo dekad yar loogu dhisaayo degmada Laasqoray oo Bosaso u jirta 130km oo keliya, Horseed Media ma ogaan in shirka qodobada looga hadley ay ka mid tahay heshiiska dekadda ay kula wareegeyso Dp World.